Baarlmaanka federaalka ka doodi waayey mooshinkii ka dhanka ahaa Baarlamanka Juba – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlmaanka federaalka ka doodi waayey mooshinkii ka dhanka ahaa Baarlamanka Juba
23rd May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta la filayey inuu u codeeyo mooshin ka dhan ah baarlamaanka KMG ah ee Juba, ayaa arrintaasi u suurageli weyday.
Markii xildhibaannadu isugu tageen xarrunta Golaha Shacabka ayaa muddo waxaa halkaas tegay gudoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari), kaasoo xildhibaanada u qeybiyay go’aan kasoo baxay Golaha Wasiirada, oo ku saabsan in xal siyaasadeed loo raadiyo muranka baarlamaanka Juba.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ugu horeyn ka hadlay furitaanka shirkii baarlamaanka ayaa xildhibaanada baarlamaanka hor dhigay codsi ka yimid Xukuumadda Soomaaliya, kaasi oo ahaa go’aan Golaha Wasiiradu uu gaaray 21-kii bishaan, oo ay baarlamaanka kaga codsanayeen in uu hakiyo muddo kooban mooshinka ku saabsan Golaha Wakiilada Maamulka KMG ah ee Jubba.
“Waxaa guddoonka soo gaaray warqad ka timid Ra’iisul wasaaraha, oo ay Xukuumaddu codsaneyso in la hakiyo mooshinka hadda socda, oo ay la wareegaan xaaladda oo ay soo baaraan, isla markaana warbixin ka keenaan, Ra’iisul wasaaraha waxa uu ii sheegay in muddo labo isbuuc ah la siiyo, oo ay warbixin cad ka keeni doonaan, marka golaha xukuumadda oo noo ah adimaha ayaa naga soo codsaday marka arrinta ayaa na hortaala” ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamanka.
Prof. Jawaari ayaa xildhibaanada usoo jeediyey in cod la geliyo codsiga Ra’iisul wasaaraha, balse xildhibaannada dhirka joogay ayaa tiradooda gaari weysay heer ay ku codeyn karaan, taasoo keentay in dib loo dhigo.
“Inta saaka shirka timid oo saxiixday waa 158, hase yeeshee tirada hadda fadhisa marka lagu daro guddoonka iyo habdhoorayaasha waa 130, marka sidaa darteed cod lama qaadi karo, arrintan waa arrin tartiib u baahan, anaga kama boodi karno xeer hoosaadka, marka fadhiga xiga ayay noo noqoneysaa, shirkana wuu noo xiranyahay” ayuu Afhayeenka Baarlamaanka, Maxamed Sheekh Cusmaan.
Marka baarlamaanku cod u qaadayo qodob markaas laga doodayo waxaa sida xeer hoosaadka baarlamaanku qabo loo baahan yahay iney xaadir yihiin ugu yaraan 139 xildhibaan.
Jawaari ayaa iska fogeeyey Facebook iyo twitter oo magaciisa sheegtay, kuwaasoo uu sheegay in lagu soo qoray waxyaabo caay ah.
“Aniga ma lihi magaceyga cinwaanada lagu sameystay oo lagu qorqoray caay iyo aflagaado kale, aniga waxaan xildhibaanada iyo shacabka u sheegayaa ina an lahayn baro loo adeegsado bulshada, sida facebook iyo twitter, xoghaynanada ayaan la wadaagay in arrintaas ay dacwad ka gudbiyaan” ayuu yiri Guddoomiye Jawaari.
Dhanka kale, amaanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta aad loo adkeeyey, waxaana xarrunta la dhigay ciidan farabadan oo ka tirsan hay’adda Nabad Sugidda Soomaaliya.
DEG-DEG: Labo xildhibaan oo lagu dhaawacay Muqdisho
Axmed Madoobe: Baarlamaanka Federaalka wuxuu ka shaqeynayaa in maamul kasta gooni isu taago